Isibuyekezo se-Asia Coronavirus COVID-19: Imikhawulo Yezokuvakasha, Isimo Samanje
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Ukuphepha » Isibuyekezo se-Asia Coronavirus COVID-19: Imikhawulo Yezokuvakasha, Isimo Samanje
Mashi 5, 2020
Ukuvuselelwa kwe-Asia ngeCoronavirus COVID-19: Imikhawulo Yezokuvakasha kanye Nesimo Samanje
Ekuqaleni kukaJanuwari 2020, kutholwe iqoqo lamacala we-pneumonia wesizathu esingaziwa eWuhan City, eHubei, eChina. Umphumela I-COVID-19 coronavirus kuholele emacaleni angaphezu kuka-95,000 aqinisekisiwe emhlabeni jikelele. Kulawa macala aqinisekisiwe, inani eliphelele "elitholakele" cishe liyi-54,000. Kusukela maphakathi noFebhuwari, izinga lokululama likhuphuke kakhulu (ngaphezu kwama-50%), ngenkathi amacala asanda kubikwa ngokuhamba kwesikhathi ehla ngesibalo. Isibuyekezo se-Asia Coronavirus COVID-19 sikhishwe yi-Destination Asia (DA).
Ezindaweni eziyi-11 eziqashwe yiDA, njengamanje awekho amacala aqinisekisiwe e-COVID-19 eMyanmar, eLaos, noma esiqhingini saseBali. I-Thailand, iVietnam, iCambodia neMalaysia zirekhode amacala angaphansi kuka-110 aqinisekisiwe ngokuhlanganyela - okuthe abantu abangu-70 sebebuyiselwe ngokuphelele. Izikhungo ze-US zokuLawulwa nokuVinjelwa kwezifo (CDC) ngoFebhuwari 27, zisuse iVietnam ohlwini lwezindawo ezisengozini yokudluliswa komphakathi kwe-COVID-19 icaphuna izinyathelo eziphelele zaseVietnam zokulwa nalolubhadane.
ISingapore neHong Kong zirekhode amacala angaphezudlwana kwekhulu ngalinye, kanti iJapane icishe ibe ngama-100. Izeluleko nge-Asia Coronavirus i-COVID-330 ikhombisa ukucubungula kabusha konke ukuhamba okungabalulekile ukuya eChina kuze kube nguMeyi. Kuzo zonke ezinye izindawo, i-DA isingatha ukubhuka njengokujwayelekile. Impilo kulezi zindawo iyaqhubeka njengokujwayelekile, futhi ngaphandle kweChina, ukuhamba uzungeze isifunda kuhlala kulula.
Ngaphandle kweChina, zonke izinhlelo zokuhamba zingaqhubeka njengokujwayelekile. Ayikho imikhawulo yokuhamba ekhishwe yi-WHO noma ohulumeni bezwe phakathi kwezinye izindawo ezikwiphothifoliyo yethu. Esikhundleni sokukhansela noma yiluphi uhambo oluhleliwe, i-DA incoma ukuhlela kabusha.
Ukuphendula imibuzo ephathelene ne-COVID-19
Ukuthola ukwaziswa kwamuva nezeluleko zokuvikela, i-WHO inikeza ngamavidiyo amaningi afundisayo nezaziso eziphrintekayo zokulanda kusuka kuzo lapha.
I-WHO iphinde inikeze umbiko wesimo sansuku zonke ngezibalo ezithile kumacala aqinisekisiwe nokusatshalaliswa kwe-COVID-19. Okwakamuva kakhulu (4 Mashi) kungabukwa lapha.
Ukuvuselelwa kwemikhawulo ejwayelekile yokuhamba
Isibuyekezo se-Asia Coronavirus COVID-19 ngemikhawulo yamanje yokuhamba ephathelene namazwe kuyo yonke inethiwekhi ye-DA sihlanganiswe iningi labeka imikhawulo ohambweni olusuka eChina.
Bonke abahambi kungakhathalekile ubuzwe babo obuvela ezwekazini laseChina bengena eHong Kong kudingeka bangene endaweni yokuhlukaniswa okuyimpoqo izinsuku eziyi-14. Lokhu kusebenza nakwabahambi abavakashele izindawo ze-Emilia-Romagna, iLombardy noma iVeneto e-Italy noma e-Iran ezinsukwini eziyi-14 ezedlule. Abahambi abavakashele iNingizimu Korea zingakapheli izinsuku eziyi-14 befike eHong Kong ngeke bavunyelwe ukungena. Isikhulu Esiphezulu simemezele ukumiswa kwezinsizakalo zabokufika eKai Tak Cruise Terminal nase-Ocean Terminal, ngakho-ke ayikho imikhumbi yemikhumbi ezokwamukelwa kuze kube kukhishwa esinye isikhathi. Kuleli qophelo, konke ukuwela kwemingcele sekuvaliwe, ngaphandle kwendawo yokuhlola ehlangene yaseShenzhen Bay, iHong Kong-Zhuhai-Macau Bridge kanye nesikhumulo sezindiza samazwe omhlaba. Njengamanje, iHong Kong Disneyland, i-Ocean Park, iNgong Ping 360 Cable Car, neJumbo Floating Restaurant zivaliwe kuze kube kukhishwa esinye isikhathi.
QAPHELA: I-World Rugby isimemezele ukuhlelwa kabusha kweCathay Pacific / HSBC Hong Kong Sevens. Umqhudelwano, owawungo-3-5 Ephreli, manje usuzodlalelwa eHong Kong Stadium kusuka ngomhlaka 16-18 Okthoba, 2020.
IKhabhinethi yezwe likaSabah neSarawak izivalile zonke izindiza ezisuka eChina. Ukuvinjelwa akukaze kwenziwe yizwekazi laseMalaysia. Isimo saseSarawak sibuye samemezela ukuthi noma ngubani ongena eSarawak oke waya eSingapore kumele azitholele yedwa izinsuku eziyishumi nane. Bonke abantu bakwamanye amazwe abavakashele iDaegu City noma iCheongdo County esifundazweni saseNyakatho Gyeonsang eRiphabhulikhi yaseKorea, zingakapheli izinsuku eziyi-14 sifikile eMalaysia (kufaka phakathi iSarawak) ngeke bavunyelwe ukungena. Abaphathi be-KLCC badinga ukuthi zonke izivakashi ezibandakanya izingane nezinsana zigcwalise ifomu lesimemezelo sezeMpilo ngaphambi kokuvakashela eSkybridge eKuala Lumpur (kusukela ngomhlaka-14 kuNhlolanja) kuze kufike esinye isaziso.
Abantu bakwamanye amazwe abavakashele iHubei kanye / noma iZifundazwe zeZhejiang eChina; noma iDaegu City noma iCheongdo County esifundazweni saseNyakatho Gyeonsang eRiphabhulikhi yaseKorea, kungakapheli izinsuku eziyi-14 ifikile eJapan, ngeke bavunyelwe ukungena. Ukuthola ukwaziswa kwamuva ngezindawo ezivaliwe eJapan, sicela uxhumane nomxhumanisi wakho we-Destination Asia Japan.
Uhulumeni wase-Indonesia umemezele ukuvinjelwa kwezindiza eziya nezisuka ezwekazini laseChina kusuka mhla zi-5 kuNhlolanja kuya phambili futhi ngeke zivumele izivakashi ezihlale eChina ezinsukwini eziyi-14 ezedlule ukuthi zingene noma zihambe. Inqubomgomo ye-visa yamahhala yezakhamizi zaseChina imisiwe okwesikhashana.
Isiphathimandla sezindiza saseVietnam simise zonke izindiza phakathi kwezwekazi laseChina neVietnam. Abahambi bezindiza ezivela emazweni anezimo ezibikiwe ze-COVID-19 kuzodingeka bathumele isimemezelo sezempilo lapho bengena eVietnam. Amasango amaningana emingcele phakathi kweVietnam neChina esifundazweni esisenyakatho seLang Son asavaliwe. Izindiza eziningi zimise okwesikhashana izindiza phakathi kweSouth Korea neVietnam. Bonke abantu bakwamanye amazwe abavakashele iDaegu City noma iCheongdo County esifundazweni saseNyakatho Gyeonsang eRiphabhulikhi yaseKorea zingakapheli izinsuku eziyi-14 bazonqatshelwa ukungena.
Abantu bakwamanye amazwe abavakashele ezwekazini iChina, i-Iran, inyakatho ye-Italy noma iSouth Korea, kungakapheli izinsuku eziyi-14 efikile eSingapore ngeke bavunyelwe ukungena noma ukuthutha.
ILao Airlines imise okwesikhashana imizila eminingi eya eChina. Uhulumeni waseLao uyekile ukukhipha ama-visa abavakashi ezindaweni zokuhlola ezisemngceleni weChina.
Isitatimende esikhishwe nguMnyango Wezempilo eThailand ngomhlaka 3 Mashi sidale ukudideka. Lesi sitatimende sikhulume ngeGerman, France, Italy, Iran, China, Taiwan, Macau, Hong Kong, Singapore, Japan, kanye neSouth Korea bahlukaniswa njengobungozi obukhulu, nokuthi abahambi abavela kulezi zindawo bazobekwa bodwa. Njengamanje, lokhu akukabekwa. Ngemibiko yesimo sokuvakasha yakamuva evela eThailand, sicela ubheke iwebhusayithi ye-Tourism Authority of Thailand.
Njengamanje, ayikho imikhawulo yokuhamba phakathi kwala mazwe neChina.
Ukuthola amanye amavidiyo nezeluleko ngezinyathelo eziyisisekelo zokuvikela i-COVID-19, vakashela i- Iwebhusayithi ye-WHO.
Asia Centers for Disease Control and Prevention China Covid-19 Impilo i-Hong Kong Hubei Iran Italy Japan Korea Kuala Lumpur I-Lombardy Malaysia Ukuphathwa I-Ngong Ping 360 Ocean restaurant Sarawak Shenzhen Singapore INingizimu Korea Stadium Thailand Ezokuvakasha Isiphathimandla Sezokuvakasha saseThailand I-Veneto Vietnam Wuhan Zhejiang
Isitatimende Sokuvakasha SaseSanta Lucia Samacala Ase-Coronavirus COVID-19
Uguquko lwe-Etihad Airways lusemkhondweni ngemali engenayo ye-US $ 506 billion